UYILO LWEDESIKA (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Uyilo lwedesika (Isikhokelo sokugqibela)
Uyilo lwedesika (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kuyilo lwethu lomgangatho wesikhokelo kubandakanya izitayile ezithandwayo, izixhobo, iindleko kunye neengcebiso ekudaleni indawo yakho efanelekileyo ngasemva. Umgangatho owenziwe kakuhle uyinto enomtsalane ngaphandle kulo naliphi na ikhaya. Idesika ibonelela abaninimzi indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokwenza ngcono indawo yokuhlala ngaphandle kwamakhaya abo. Ikwayindawo entle yokonwabisa kwaye inokunyusa ixabiso lepropathi yekhaya lakho ukuba uthatha isigqibo sokuthengisa.
Ngaphambi kokuba uqale ukwakha ipaki yakho, kufuneka uqwalasele uyilo lomgangatho wakho. Izinto ekufuneka uziqwalasele ngokwenene bobabini ubungakanani bendawo oza kuhlala kuyo, kunye nesitayile somgangatho oza kulungela uyilo lwakho lwekhaya xa lilonke. Ukongeza uyakufuna ukucinga ngezixhobo ozisebenzisayo ekwakhiweni kwayo kunye naziphi na izinto zesiko ongathanda ukuzongeza.
Amanqanaba amanqanaba amaninzi
Iideki ezimbini ezinamaBali
Iindidi zezixhobo zeDisk
Iindidi zeenkuni zomthi
Ukusiwa kweCedar Wood
Uxinzelelo luphathwe ngokuhombisa ngomthi
Iidiski zomthi ongaqhelekanga
UkuHamba kweTeak yaseBrazil
Ukudibanisa iidesika kunye neTayile zeDisk
Yeyiphi eyona Wood iyiDisk?
UkuHanjiswa okuDibeneyo kweVS Wood
Yeyiphi eyona Ndawo yoLondolozo lwaSimahla ilungileyo?
Iindleko zokwakha iDesika
Iindleko zedesika ngeenyawo zenyawo nganye
Iindleko zokuHanjiswa kweenkuni
Iindleko zokudibanisa ezidibeneyo
Iindleko ze-Trex Decking
Iindleko zabasebenzi zokwakha iDesika
Uyilo lweDisk yesiqhelo
Umngxuma woMlilo woMngxuma
Spa yedesika okanye iphuli
Iindidi zeTrk Railings
Izibane zeNyathelo leDisk
Izibane zePost Deck
Ngaphantsi kweNkqubo yokuHanjiswa kweDisk
Uyila njani iDiski
Idesika yokubala / yokuQikelela
IziCwangciso zeDisk yasimahla
Izicwangciso zeWood Deck
Iikiti zeDisk Deck
Iikontrakta zeDiksi yokuQesha
Ukugcinwa kwedesika yomthi
Idikki yokungenwa ngamanzi
Ukwahlulwa kweenkuni kunye nokuDityaniswa kweWood Wood
Eyona ndawo i-Deck Stain
Amabala aphezulu eDeksi aLinganisiweyo ngo-2019
Itywina leWood Deck
Ipeyinti efanelekileyo yedesika
Ukubuyiselwa kweDisk Deck
1. Jonga iiBhodi zokuSonga
2. Vavanya iizipikili kunye nezikhonkwane
3. Gquma izikrweqe ngebala okanye ipeyinti
4. Jonga ukubola kwaye ufake isicelo sokugcwalisa iinkuni
Ukuhlaziywa kwakhona kweenkuni
Ungayisusa njani iAlgae eluhlaza kwiWood Deck
Nazi ezinye zezona zinto zidumileyo zasemva kwendlu ezikhoyo:
Olu lolona hlobo lulula, olusisiseko yoyilo lomgangatho. Iiplatform zakha ezantsi emhlabeni nakwinqanaba lomgangatho. Zihlala zakhiwe ziqhotyoshelwe kumakhaya akumgangatho omnye kwaye azidingi mizila. Endaweni yoko, ii-perimeters zeeplatfom zeqonga zihlala zichongiwe zezinye izinto ezinjengezitena okanye ezokutyala.
Umgangatho ophakamileyo ngumgangatho owakhiweyo uphakanyisiwe emhlabeni. Inokuphakanyiswa nje iinyawo ezimbalwa emhlabeni okanye iphakame njengebali lesibini lendlu. Ukuba uhlala kwindawo enemvula eninzi okanye nezikhukula, le yindawo entle enokuba nayo. Abantu abaninzi abaneediksi eziphakanyisiweyo basebenzisa indawo ephantsi komgangatho kwaye bayisebenzise njengendawo yokugcina.
Umgangatho wokuma simahla ufana neqonga leqonga ngengqiqo yokuba lakhiwe kuphela ukuze lime ii-intshi ezimbalwa emhlabeni. Nangona kunjalo, yahlukile ngengqondo yokuba yakhiwe ukuze ingaqhotyoshelwanga endlwini okanye kulwakhiwo, yiyo loo nto ke ikhululekile. Elinye igama lolu hlobo loyilo yindawo yokuntywila.
Umgangatho wamanqanaba amanqanaba ngowokwakha ukubandakanya inqanaba elinye okanye amabini aphakanyisiweyo okanye amaqonga. Elinye lala maqonga lenzelwe ukusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngelixa umahluko phakathi kwamanqanaba inokuba nje linyathelo okanye amabini ezantsi, isakunika imvakalelo yendawo kwaye ikuvumela ukuba ube namagumbi ahlukeneyo kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Umzekelo, unokuba nenqanaba lamanqanaba amaninzi apho iqonga lokuqala okanye indawo ephakanyisiweyo ibekwe ecaleni kwendlu. Le ndawo yokuqala inokusetyenziswa njengendawo yokupheka kunye neyokutya. Emva koko unokuba nomgangatho wesibini osezantsi, mhlawumbi inyathelo lokuya ezantsi, elinokuthi lenzelwe ukuba ibe yindawo efanelekileyo yokuphumla apho wena kunye neendwendwe zakho ninokuhlala kamnandi kwaye nonwabele umoya omtsha kunye nencoko. Emva koko, unokuba nelinye inqanaba, mhlawumbi uye ecaleni apho unokufaka khona ibhafu eshushu okanye umngxunya womlilo okanye itafile ye-ping-pong.
Ukuba nenqanawa yamanqanaba amaninzi ikuvumela ukuba ube nezinto ezininzi ezenzekayo kwidesika yakho ngaxeshanye, ngaphandle kokuxinana. Uyilo olulungileyo ukuba ube nalo ukuba uceba ukwenza izinto ezininzi zokuzonwabisa kumgangatho wakho. Kuyilo, nangona kunjalo, uyilo olunokufuna indawo enkulu kunye nolondolozo ukuze ugcine oko engqondweni xa uthatha isigqibo sokuba ngaba isitayile senqanaba lamanqanaba amaninzi silungile ekhayeni lakho.
Umgangatho onemigangatho emibini yindawo ekumgangatho ophakamileyo apho ibali lesibini liphakanyisiwe okanye laphakanyiswa khona ukuze lihlale phezulu kwinqanaba lokuqala. Amanqanaba amabini adityaniswa zizinyuko. Iidesika ezinemigangatho emibini zakhiwe ziqhotyoshelwe kulwakhiwo olunamanqanaba amabini ubuncinci ukuphakama.
Iinqonga ezinemigangatho emibini lolona hlobo lubanzi loyilo lomgangatho. Kodwa zezona zibiza kakhulu ngenxa yomzamo ofunekayo wokuzakha. Uyilo oluthile lubonisa indawo esezantsi yeqonga kunye nendawo engaphezulu yeveranda. Funda ngakumbi malunga yintoni iveranda iidesika ezingasemva apha.
Kukho izitayile ezithile ezinokutshatisa uyilo lwekhaya lakho kwaye zikunike inkangeleko echanekileyo oyifunayo. Izitayile ezidumileyo zibandakanya ezemveli, zangoku, zangoku, zekoloniyali, zaseAsia, intaba kunye nonxweme. Nantsi imifanekiso kunye neenkcazo zezona zitayile zidumileyo zekhaya.
Umgangatho wemveli uhlala wakhiwa ngomthi okanye ngento eyenzelwe ngabom ukujonga okomthi. Yenzelwe ukuba ijongeke intle kwaye ibingazukubakho kwindawo yakudala yekhaya.
Imigca yedesika ithanjiswe ngabom kukusetyenziswa kweekona kunye nee-octagons. Enye into eqhelekileyo kumgangatho wesiko kukusetyenziswa kwayo kokubumba okuncinci kunye neeposi zokuhombisa.
Idesika eyilwe kwisitayile sangoku ilungile kwaye yeyangoku. Yakhelwe kwimbono yokuba kuncinci okungaphezulu. Iya kusebenzisa iimilo ezininzi ezisisiseko kwaye ibonakalise imigca ecocekileyo. Umgangatho unokuqwalaselwa njengangoku ukuba usebenzisa izinto zangoku, zokugcina izinto ezinje ngezinto ezidityanisiweyo, isinyithi, i-PVC, okanye ilitye, endaweni okanye ecaleni komthi wemveli.
Isitayile somgangatho wangoku sinokuzisa izinto ezithandwayo ngoku. Imizekelo embalwa inokuba luphawu lwamanzi, iprojektha yangaphandle yeTV, ipayipi yomlilo, okanye ibhentshi yesiko elenziwe ngezona ntlobo zintsha zokwakha.
Umgangatho wale mihla uyilelwe usebenzisa ubugcisa bokwakha bale mihla. Olunye uphawu loyilo lwala maxesha kukusetyenziswa kwezinto zobugcisa ezinje ngentsimbi, ikhonkrithi kunye neglasi. Kukwakho nogxininiso kwimbono yokuba ifom ilandela umsebenzi. A uyilo lomgangatho wanamhlanje yenye eyamkela ubuncinci kwaye isebenzisa umhombiso omncinci kakhulu ngenkangeleko ethe tyaba, emilanjeni kunye nala maxesha.
Ukuba unethamsanqa lokuhlala kwindawo enembonakalo yolwandle okanye nawuphina omnye umzimba wamanzi, indawo enesitayile sonxweme lukhetho olukhulu. Olu hlobo lomgangatho kufuneka lwakhiwe ukuze kwandiswe iimbono kwaye lubambelele kwiimeko zemozulu ezimbi.
Isitayile somgangatho wonxweme sihlala senziwe ngomthi oqinisekiswe yimozulu okanye izinto ezidityanisiweyo. Ikwabandakanya izinto zangoku ezinje ngesinyithi okanye iglasi kwizitrato ezinqumlayo ezinje ngezitimela okanye iifreyimu. Ijongeka njengokuthandeka kwendabuko kunye nokuthembeka kwale mihla.
Le deck yakhiwe ecaleni kwemigca yesitayile sokwakha sobukoloniyali, kugxininiswa kwiimpawu zoyilo olulinganayo. Inqaku elinye lokuma kwiidesika zesitayile sekoloniyali kukusetyenziswa komhlophe izitimela zomgangatho kunye neminqwazi yeposi yokuhombisa. Bahlala bebandakanya iziqwenga ezinje nge-pergolas kwaye zakhiwe kwizityalo nakwiibhentshi.
Isitayile somgangatho waseAsia siquka izinto zenkcubeko yasempuma. Kukho ugxininiso olukhulu kubhalansi, njengokudala umahluko phakathi kwemibala emnyama kunye nokukhanya kunye noburhabaxa kunye nokuthamba. Kwidesika yaseAsia yokwenyani, unokufuna ukubandakanya ezinye zeengcamango ze-feng shui, kodwa ukuba awufuni ukuya kude, ungasoloko ukongeza ezinye izinto eziphefumlelweyo zaseAsia.
Esi sitayile somgangatho senzelwe ngabom ukubhengeza imvakalelo yokuba usendlwini esehlathini. Ibandakanya izinto zoyilo lwe-rustic kwaye inokujonga uluhlu ukusuka ekujongeni okwangoku ukuya kwirhabaxa kwaye kungagqitywanga kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali. Amaxesha amaninzi kuya kubakho ukubiyela okunzima kunye nomgaqo kaloliwe.
Olu hlobo lomgangatho lwakhiwe kakuhle kwindawo enembono elungileyo. Yenzelwe ukubonelela indawo yokukhangela apho ungonwabela ubuhle bendalo. Ikwanokubonisa ukusetyenziswa kwezixhobo zendalo ezikufuphi ezinje ngemithi yendawo efumanekileyo okanye amatye.
Emva kokuba uthathe isigqibo malunga nesitayile kunye noyilo lomgangatho wakho, kuya kufuneka uqale ucinge l malunga nokuba loluphi uhlobo lwezinto oza kuzisebenzisa ukwakha idesika yakho.
Kukho izinto ezintathu ekufuneka ucinge ngazo xa usenza isigqibo malunga nezinto zokuhombisa. Owokuqala ngowokuba, ngaba loo nto iya kulungela umbono wakho wokuba ikhonkco lakho liza kujongeka kanjani? Okwesibini, ngaba izinto zomgangatho wokuhamba ziya kulungelana nendlela yakho yokuphila? Ngaba unayo ixesha lokugcina ipakethe eyakhiwe ngolu hlobo? Okokugqibela, kuya kufuneka ucinge malunga nokuba izakubiza malini le nto kwaye ukuba iya kulungela uhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Nazi izinto eziqhelekileyo ezinqabileyo onokuthi uziqwalasele kunye nezinye zeenzuzo kunye neengozi zazo.
Olona hlobo luthandwayo lwezinto zokuhombisa kufuneka lube ngumthi. Izinto zokuhombisa iinkuni ziphinde zahlelwa ngokweendidi ezimbini: umthi othambileyo kunye nomthi onzima ongaziwayo. Ezona ntlobo zaziwayo zomthi wokwakha indawo yomthi womsedare, redwood, ipine, Ipe kunye ne teak yaseBrazil. Makhe sixoxe ngeendlela ezimbalwa zeenkuni eziqhelekileyo zokuhombisa.
Umthi womsedare wokuhombisa yinto ethandwa kakhulu kwiidesika njengoko kusaziwa ngokuba kukunganyangeki kwemozulu. Eyakhelwe ngokufanelekileyo, iiplanga zemisedare zomelele. Zintle kakhulu njengoko, xa zivezwe lilanga, umthi womsedare ujika umbala othambileyo, ongwevu.
Umthi womsedare ngumthi othambileyo ke uziva ulungile ukubamba. Kulula nokusebenza nayo. Ngelishwa, umthi wemisedare oselemdala uqala ukuba nzima ukufumana kwaye unokubiza kakhulu. Uninzi lomthi womsedare ofumanekayo ludla ngokuba ngumthi womsedare wokukhula okwesibini kwaye, ngelixa usemhle, kufuneka uqiniseke ukuba iibhodi ozikhethileyo zisenomthi wentliziyo kwaye hayi umthi womthi kungenjalo azizukufana nemozulu.
Iiplanga zemisedare zinokuba sesona sondlo siphezulu. Ngelixa ukhuni lomsedare luchasene nemozulu, ukuhlala ubanda kubanda, ukunyibilika, kunye notshintsho olusuka kwimeko efumileyo ukuya kwimeko eyomileyo luya kudala umthi. Ukugcina iplanga lakho lomthi womsedare likwimeko entle, kuyacetyiswa kakhulu ukuba ucoceke kakuhle kumgangatho wonyango kwaye uwuphathe.
Ngelixa oku kunokuba ngathi kuyadinisa, kuya kufaneleka ukuba, indawo esemgangathweni egcinwe kakuhle yomthi womsedare kufuneka ikunike indawo entle yokuphumla nokonwabela ngaphandle iminyaka eli-15 ubuncinci.
Njengomthi womsedare, umthi obomvu nawo uthathwa njengomthi othambileyo. Iyaziwa njengempahla yomgangatho kuba kulula ukuyila kwaye uyinqumle ngeebhodi ezichanekileyo, ngaloo ndlela yenza kube lula ukwakha nayo.
Ukuhonjiswa kweRedwood kuhle kakhulu, abanye banokuthi baphikise bahle nangaphezulu komthi womsedare. I-redwood enganyangekiyo ngumbala ogudileyo, obomvu ngombala. Inoburhabaxa obuthambileyo kunye nobuthambileyo kodwa yomelele phantsi kweenyawo. Ukuhonjiswa kweRedwood akuphihli okanye kuqhekeze ngokulula.
Umthi obizwa ngokuba ngumthi obomvu ufunwa ngenxa yokuba umelana nokubola. Nangona kunjalo, i-heartwood kunokuba nzima ukuyifumana kwaye ngenxa yoko, iyabiza. I-Sapwood idla ngokulula ukuyifumana kwaye, ngelixa inobuhle be-heartwood, ayomelelanga kwaye iya kufuna ulondolozo ngakumbi ukunqanda ukubola.
Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni ngumthi okhe wanyangwa ngaphambi kwexesha ukuze ungabikho kwimozulu. Kule mihla, uninzi lweebhodi zeenkuni eziphathwe ngoxinzelelo ziphathwa nge-MCA okanye i-azole yobhedu enemicronized. Njengoko igama lisitsho, kukho isixa esincinci sobhedu olunamanzi olunyibilikayo kumxube. La masuntswana obhedu angena nzulu emthini aze ancede ukuwagcina.
I-MCA iphathe iinkuni iphelela ekumnyama kancinci ngombala emva koko iinkuni ezinganyangekiyo ke qiniseka ukuba uyayijonga loo nto xa usenza isigqibo ngokuchasene nophatho oluphathwayo.
Enye indlela yokwenza uxinzelelo lokuphatha iinkuni kukufudumeza ubushushu. Xa ushushu ubushushu bomthi, zonke iiswekile ezisemthini zinikezelwa ngaphakathi. Siswekile esemthini etsala izimbungulu kunye neebhaktiriya. Bondla iishukela ezibangela ukuba iinkuni zibole kwaye zibole.
Inkuni eshushu shushu nayo ayinamanzi. Iibhodi ezishushu ezishushu azizukufunxa amanzi njengemichiza ebangela ukuba amanzi anamathele emithini isuswe kwinkqubo yokufudumeza.
Umthi oshushu oshushu unokuhlala iminyaka engama-25 okanye nangaphezulu. Nangona kunjalo, inkqubo yokufudumeza thermal ifuna ukuba iibhodi zivezwe kuluhlu lwamaqondo obushushu aphezulu. Oku kufuna amandla amaninzi kwaye ngenxa yoko, kuphakanyiswe ixabiso elingaphaya kwelemithi enganyangekiyo.
I-Pine ayisoloko igqalwa njengokhetho lokuqala kulwakhiwo lwenqanawa kuba ihlala ikhawuleza kwimozulu kunezinye iintlobo zokhuni. Nangona kunjalo, ngenxa yexabiso eliphantsi kunye nokufumaneka kwayo iseyinto eqhelekileyo ekukhetheni.
Ukuthengwa kwepine ephathwe ngakwelinye icala kunokunyusa ixesha lokuphila kwayo ukuya kwiminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 kuyenza ibe lukhetho oluqinileyo. Ukunceda ukugcina ipine eluhlaza ekrwada umntu unokupeyinta okanye atywine iinkuni ukunceda ukwandisa ubude bayo.
umyalezo kumtshakazi ngaphambi komtshato
Iiplanga zomthi ongaqhelekanga ezikhulayo ziye zakhula ekuthandeni kula mashumi ambalwa eminyaka adlulileyo. Le yimigangatho eyenziwe ngemithi eqinileyo efunyanwa kwimithi ekhoyo kumazwe angaphandle kweNyakatho Melika. Ezi ntlobo zemithi elukhuni zihlala zifumaneka kuMzantsi Melika okanye eAsia.
Iindidi ezimbini zeentlobo zemithi ekhuni esetyenziswayo njengezinto zokuhombisa zi-Ipe kunye neBrazil Teak.
Ipe decks zenziwe ngomthi okomeleleyo we-tropical owomeleleyo okwaziwa ngokuba yi-ironwood. Ifumana elo gama ngesizathu esivakalayo, iinkuni zayo zixinene kwaye zinzima kwaye ziyabola kwaye ziyanyamezela izinambuzane. Umthi we-Ipe uxinene kwaye unzima kangangokuba ufumana iklasi yokulinganisa umlilo, inqanaba elifanayo nekhonkrithi kunye nentsimbi.
Umthi we-Ipe nawo uyathandwa ngenxa yobuhle bayo bengqolowa nombala. Imozulu iyenzela umthunzi omhle wesilivere-ngwevu. Omnye umzekelo omhle wokuqina kwe-ipe kunye nobuhle unokufumaneka kwiAtlantic City. Uninzi lwezixhobo ezisemgangathweni ezisetyenziswa kwiAtlantic City Boardwalk yinyani ye-ipe kwaye ihlale ngaphezulu kweminyaka engama-25.
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga ne-ipe wood, bubulukhuni, sesinye sezizathu zokuba le nto inokuba yinto enzima kakhulu ukusebenza nayo xa usakha ipaki yakho. Ngenxa yoxinano nobulukhuni bomthi, akukho lula ukusika okanye ukumila. Ungeke ukwazi ukusebenzisa izikhonkwane okanye izikhonkwane xa uqokelela iplanga leenkuni. Endaweni yoko, kuya kufuneka ugrumbe imingxunya yokulinga emithini.
Ngenxa yobuninzi beplanga ye-ipe, ayinamanzi njengoko ingafaki izinto ezilulwelo ngokulula. Nangona oku kuyinzuzo xa kuziwa ekukhuselweni kwemozulu, kunokuba yinto engalunganga ukuba ufuna ukutshintsha umbala okanye ubume bomhlaba wakho we-ipe. Uninzi lwamabala eenkuni kunye nokutywina akuyi kuthi nkxu kwimithi ye-ipe, ke uya kushiywa ungqimba olungenzulu kumgangatho wokhuni oya kuthi wonwabe ngokukhawuleza okanye uxobuke xa ubonakaliswe elangeni okanye kuhanjiso lweenyawo olubanzi.
Ukuba awufuni ukugcina umbala wendalo wedebe lakho le-ipe, kuya kufuneka usebenzise ukutyabeka okuqinileyo ke amabala emveli. Kuya kufuneka uzame ukutyabeka okususelwa emanzini nge-pigment ene-iron-oxide.
Olu hlobo lomthi oluqinileyo lubizwa ngokuba ngumthi weCumaru kwaye lufunyenwe kumthi ozelwe eBrazil. Yaziwa njenge Teak yaseBrazil.
Ngumthi omhle onokuwusebenzisa njengezinto zokuhombisa njengoko unokufumana i-Teak yaseBrazil kwimibala ebomvu nebomvu emdaka ngegolide. Ikwalungelelaniswe kakuhle kwaye intle ukuyichukumisa kunye nokuhamba kuyo.
Ukulunga kunye nokubi kweBrazil Teak decking ziyafana nezomthi we-ipe. Ipro, njengokhuni oluqinileyo lunengqolowa eqinileyo kwaye iyaxinana. Oku kuthetha ukuba ayinamanzi kwaye iyamelana nokulwa kunye nokubola. Ngaphandle konyango olukhethekileyo, ipaki eyenziwe nge teak yaseBrazil inokuhlala phantse iminyaka engama-25.
Ngelishwa, njenge-ipe wood, imithi yaseBrazil inzima kwaye inzima ukusebenza nayo. Ukuxinana kukwathetha ukuba kunzima kumabala okutywina kunye nokutywina ukuze ungene ngaphakathi. Kuya kufuneka ukuba ufake iidyasi ezininzi okanye uyeke ukudyobha nokutywina.
Kuba i-teak yaseBrazil enganyangekiyo ayinamanzi, ukungakwazi ukufaka isicelo se-sealant ayisiyonto inkulu. Ngokubhekiselele kumabala, njengoko i-Teak yaseBrazil ngokwemvelo iza ngemibala emihle, unokufumana umthunzi owuthandayo okanye usebenze nomnye umthi onokuthatha ibala elingcono.
Ukudibanisa iithayile zomgangatho wokhuni- Jonga eWayfair
Iithayile zedesika zizinto ezinomgangatho othengiswa ngohlobo lweetiles, izikwere zezinto ezibonakalayo kuneeplanga okanye iizilebhu. Ziyindlela engabizi mali kwaye elula yokwakha umgangatho wedesika.
Iithayile ezininzi zenzelwe ukuba zifane nomthi ngombala kunye nokuthungwa, kodwa kukwakho iithayile zeteck ezenziwe nge-OUT ngomthi. Unokufumana iithayile zamatye okanye izinto zokwenziwa.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa iithayile zomgangatho wokhuni, ufumana isiphumo esihle somgangatho opheleleyo weenkuni. Uyakufumana ezinye zeengxaki, kuxhomekeke kuhlobo lwethayile yomthi okhetha ukuyisebenzisa. Iithayile zomgangatho wokhuni aziyi kuba kukunganyangeki ukubola okanye ukujijisana njengeetheko ezenziwe ngezinto zokwenziwa.
Kuya kufuneka uphinde wenze ulondolozo lwamaxesha ngeethayile zomgangatho wokhuni. Uncedo lweetayile zomgangatho wokhuni ngaphezulu kweeplanga zomthi zilula ukufaka, ukubuyisela nokulungisa.
Iithayile zedesika ziyilelwe ngokudibanisa kwaye ziqhekeze kunye ukwenza umphezulu owomeleleyo nozinzileyo. Ukuba iithayile ezimbalwa zonakalisiwe, ungazikhupha ngokulula kwaye ubeke ezitsha endaweni yazo. Ke, ukuba iinxalenye zeplanga lakho leplanga lidlakadlaka okanye ligugile kwaye usebenzisa iithayile zomgangatho, ungazitshintsha ngokwakho iithayile ezigugileyo. Ukutshintsha iithayile kukwabiza kakhulu iindleko emva koko ukhuphe iibhodi zamaplanga okanye iiplanga.
Xa usakha idreyini enee-tiles ze-deck, nokuba zingumthi okanye naluphi na uhlobo lwezixhobo, wakhe umngxuma odibeneyo. Iindawo zokungenelela ziyaziwa njalo ngenxa yendlela ezakhiwe ngayo, ngokusisiseko ngokufaka izikwere zonxibelelwano zezixhobo ngendlela yeethayile.
Njengoko sele siphawulile, umthi usengowona mxholo wokukhetha okhethiweyo.Imisedari, iredwood kunye noxinzelelo oluphathwe ngokhuni olwenziwe kwiintlobo ezahlukeneyo zithathwa njengezona ziphezulu zintathu ziphuma ngaphandle. Ngokubhekisele kubuhle bendalo ochaphazelekayo bobabini umsedare kunye nomthi obomvu uqhele ukubonakala umhle ngakumbi kunoxinzelelo oluphathwe ngokhuni.
Umsedare kunye nokhuni olubomvu nazo zombini ziyamelana ngokwendalo nezinambuzane ezibolayo nezikruqulayo, zibenza ukhetho olufanelekileyo ukuba le micimbi yingxaki kwindawo yakho. Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni lunyangiwe ngemichiza ukuthintela izinambuzane nokubola kungenzeki.
Luhlobo luni lomthi ogqiba ekubeni ulusebenzise kumgangatho wakho ikakhulu kuxhomekeke kukhetho lwakho. Kuya kufuneka ukhethe uhlobo lweenkuni oluya kulingana nombono wakho uphela kobude bomgangatho wakho. Kwakhona kungcono kakhulu ukuba umbala weenkuni kunye nokuthungwa kufana nesitayela sekhaya lakho.
Ngokubhekisele ekuzinzileni, njengoko sele siphawulile, iinkuni ezilukhuni - ezingaqhelekanga kunye nokunye - zihlala zizinzile. Zingabiza kakhulu, kodwa ngokulondolozwa okufanelekileyo, ziya kuhlala kuwe ubuncinci amashumi ambalwa eminyaka, ke ziya kuba kufanelekile ekuhambeni kwexesha. Nokuba awucwangcisanga ukuhlala kwipropathi ixesha elide, indawo yomthi eyomeleleyo, egcinwe kakuhle yomthi inokuba nomtsalane kakhulu kubathengi abanokubakho kwaye iya kwandisa ixabiso lepropathi.
Ngelixa ukhuni lusathandwa kwaye lukhetho lwesiqhelo kwizinto zomgangatho, ukuhonjiswa ngokudibeneyo yinto yesibini ethandwa kakhulu ekhoyo namhlanje.
Ukuhonjiswa ngokudibeneyo ngoku kuyinto eqhelekileyo kunye nokhetho oluthandwayo phakathi kwabantu abafuna ukubekwa kumgangatho wamakhaya abo. Ukuthandwa kuvela ikakhulu kwinto yokuba, xa kuthelekiswa nomthi, yomelele ngakumbi kwaye kulula ukuyigcina.
Xa unesiteji esidibeneyo, ngokusisiseko unendawo yokuhombisa eyenziwe ngezinto zendalo kunye nezinto zokwenziwa. Izinto zokuhombisa ezidityanisiweyo zenziwe ngeplastikhi, imichiza KUNYE nezinto zokugcwalisa iinkuni. Izinto ezenziwe ngomthi ekudibaneni okudityanisiweyo ziintsinga zomthi okanye intyatyambo.
Ngokusebenzisa iinkuni njengokugcwalisa, ezi zinto zenziweyo zenziwe ukuba zibonakale kwaye zivakale ngathi ziinkuni. Ke banethuba lokubandakanya ubuhle beemithi kunye nokuthungwa kodwa abathandeki kulomonakalo phantsi kokuchaphazeleka ixesha elide kwizinto. Iibhodi ezininzi zokwenziwa kunye nomgaqo kaloliwe ziyilelwe ukulingisa inkangeleko kunye nokuthungwa kwengqolowa ngomthi wendalo.
Eyona nto iphosakeleyo ekudibaniseni indleko yindleko zayo. Kuhlala kukujikeleze kabini ixabiso leeplanga ezicocekileyo. Ukwakha ipakethi edityanisiweyo kuya kukuxabisa malunga namaxesha ama-1 ukuya kuma-3 kangangoko kunokwenzeka ukuba ubusakha iplanga lakho ngomthi womsedare.
Izinto ezidityanisiweyo zinzima kakhulu kunemithi kwaye ezinye zinokungabikho ixesha elide njengokhuni, ngokuxhomekeke kubungakanani bedonki yakho, unokuba nobunzima bokubeka ii-joists. Unokufuna izinto zokubopha ezizodwa ngokuxhomekeke kuhlobo lwezinto ezidityanisiweyo ogqiba kuzisebenzisa.
Ngelixa ukufaka ikhonkco kunye nezinto ezidityanisiweyo kunokukuxabisa ngakumbi, ekuhambeni kwexesha, kunokukugcina kulondolozo. Izinto zokwenziwa azithambekele ekulweni naseqhekekeni ngenxa yokuvezwa zizinto, ngenxa yoko awuzukutshintsha indawo yakho yomgangatho rhoqo.
Iidesika zomdibaniselwano zikwalula kakhulu ukuzigcina. Sele beza ngemibala eyahlukeneyo enokuthi ifane nekhaya lakho kwaye bahlala bekhuselekile ekuphelisweni nasekunyangeni ukuze banganyangeki. Akukho mfuneko yokuba upeyintwe okanye ungcoliswe. Kananjalo, kulula kakhulu ukuzicoca. Kufuneka utshayele okanye ucofe kwaye usule iibhodi kunye neziporo rhoqo ngoku kwaye indawo yakho iya kujongeka intle njengokutsha.
I-Trex luphawu oluqhelekileyo lwezixhobo zomgangatho wokudibanisa. I-Trex yenziwe ngezinto zokwenziwa ezibizwa ngokuba yi-polyethylene. I-Polyethylene yiplastiki eqhelekileyo esetyenziselwa ukuhombisa. Ihlala iyinto yeplastikhi erisayikilishwe exutywe nemingxunya yeenkuni ukuvumela ukubonakala okwenyani kunye nendalo.
Isizathu esinye sokuba kutheni olu hlobo lwezinto zokucheba luthandwa kungenxa yoluhlu olubanzi lwemibala yokuhombisa iTrex. Imathiriyeli yokuhombisa i-Trex iyakwazi ukuza ngemibala eyahlukeneyo kwaye inokubonisa nezithunzi ezilinganisa ukubetha okufumaneka kwimithi yendalo.
Oku kuyenza ukuba ikwazi ngakumbi ukunika ukubukeka kunye nokuziva kwakho ngomthi ngelixa ugcina ukuzinza kwezinto zokwenziwa. Eminye imibala ethandwayo yokuhombisa i-Spiced Rum, enomthunzi ofudumeleyo kunye nomhlaba kunye neLava Rock, ene-red-red streaking, elinganisa umthi onzima wendalo.
Ukuhonjiswa ngePvv ngumgangatho weplastiki owenziweyo. Yinto efanelekileyo yokugcina izinto ezisezantsi. Kuza iintlobo ezahlukeneyo zeepateni kunye nemibala elinganisa ukhuni. Yiyo loo nto ifake ubuhle bemithi yendalo, ngamandla kunye nokucoca okulula kweplastiki.
Ukungancedi kwe-PVC decking kukuba ihlala ithambekele ekwandiseni nasekunciphiseni ubude xa ifunyenwe kumaqondo obushushu ashushu okanye abandayo. Ukuba isakhiwo sakho sine-PVC, qiniseka ukubonelela ngesithuba esaneleyo phakathi kweebhodi.
Ukuba ufuna indawo enemozulu kwaye yomelele kodwa ungenalo ixesha elininzi okanye umonde wokwenza ulondolozo lwedesika rhoqo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukusebenzisa i-vinyl decking.
Ukuhonjiswa kweVinyl kuza ngemibala emininzi kunye noburhabaxa. Unokuthenga i-vinyl decking elingisa ukubonakala kokuhonjiswa kweenkuni zemveli. Ngokungafaniyo nokuhonjiswa kweenkuni nangona kunjalo, ukuhonjiswa kwe-vinyl kufuna ulondolozo phantse.
Nje ukuba ubeke i-vinyl deck, konke okufuneka ukwenze ngamanye amaxesha ukutshayela umphezulu ngomtshayelo okanye ukuswayipha ngepop rhoqo ngoku. Akukho mfuneko yesanti okanye ukugcina kanye okanye kabini ngonyaka. Ukuhonjiswa kweVinyl kuthandwa ngakumbi kwiindawo ezaziwa ngokuba nemozulu emanzi njengoko ingazukuphotha xa ifakiwe.
Izinto ezenziwe ngeAluminiyam zenziwe ngealuminium enemibala kusetyenziswa ukutyabeka umgubo. Unokufumana i-aluminium decking kwimibala eyahlukeneyo-kubandakanya imibala elinganisa iintlobo ezithandwayo zezinto ezenziwe ngomthi. Ziza nakwiindidi ezahlukahlukeneyo zokutya okuziinkozo ukuze i-aluminium decking ibonakale ngathi ngumthi wendalo.
Ukulungiswa kweAluminiyam kulondolozo lwasimahla. Awuyi kufuna ukungcolisa, ukutywina okanye ukukhusela imozulu. Kulula kakhulu ukucoca. Shayela nje okanye uyi-mop rhoqo. Unokufuna kwakhona uxinzelelo lokuhlamba ukuze ususe naziphi na amabala anenkani, afana nencindi, kodwa ungakwenza oko kube kanye ngonyaka okanye njengoko kufuneka.
I-Aluminium yinto elungileyo kakhulu ukuba uyisebenzise ukuba ucwangcisa indawo enendawo yokugcina engaphantsi. Iibhodi zomgangatho weAluminiyam ziyaqhekeka kunye, kunye nemijelo yokukhohlisa kumphezulu ukuyenza ibonakale njengeebhodi ezahlukeneyo. Ngenxa yoku nangona kunjalo, amanzi awazukuntywila ezantsi kwiidesika zakho zangaphantsi, enze uphahla olungangeni manzi kwindawo yakho yokugcina.
Ukuba ukhangela indawo yokuhlala esezantsi, mhlawumbi ungangcono ngokuya kwindawo enezinto zokwenziwa ezinje ngeTrx Decking okanye iVinyl yokuhombisa. Ezi ntlobo zifuna ukugcinwa okuncinci kunenkuni yendalo eya kuthi ifune ukuphindwa igcinwe kwaye iphindwe ithengiswe ukugcina ubuhle bayo.
Ukuhonjiswa kweAluminiyam lukhetho olufanelekileyo njengoko ungadingi kungcolisa okanye ukujongana nemozulu. Kwakhona, ngaphandle kokuba kukho ukungcola okunzulu ngesizathu esithile, akufuneki ukuba kufuneka uxinzelele uhlambe i-aluminium deck. Ukuyigcina icocekile konke okufuneka ukwenze kukutshayela okanye uku-mop rhoqo.
Zimbini izinto ezinokuchaphazela indleko yedesika yakho. Eyokuqala yimifanekiso eqingqiweyo, ngelixa eyesibini luhlobo lwezixhobo ozisebenzisayo.
Uninzi lweentlobo zezinto zokuhombisa ziya kubiza malunga ne-15-30 yeedola ngeenyawo zenyawo. Ke, umzekelo, ufuna ukwakha i-350-foot deck ngaphandle komsedare kunye nemisedare ixabisa i $ 15 ngeenyawo zenyawo, ujonge uhlahlo-lwabiwo mali lwama- $ 5,200. Ukuba, nangona kunjalo, ufuna ukusebenzisa izinto zokudibanisa ezibiza kakhulu ($ 30), ujonge uhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 10,500.
Ngokomcebisi weKhaya, ukwakha ipaki engaphantsi kweenyawo ezingama-200 kuya kubiza i-avareji ye- $ 4,836. Umgangatho weenyawo ezingama-200-500 uya kubiza i-avareji ye- $ 8,142, ngelixa enye yeenyawo ezingaphezulu kwama-500 ixabisa malunga ne-14,504 yeedola.
Umcebisi weKhaya ubeka indleko zeentlobo ezahlukeneyo zokuhonjiswa kweenkuni esizikhankanye kule post ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuthoba isivuno: $ 3.75
Ukuhonjiswa kweRedwood: $ 7.75
Ipe decking: $ 22.50
Okwangoku, amaXabiso eSisombululo seMithi esiKhethekileyo kwiBrazil Teak decking kwi $ 1.61 okanye kwi-9.43 yeedola, kuxhomekeke kubungakanani.
Umcebisi weKhaya ubeka indleko zokuhombisa ngokudibeneyo malunga ne- $ 35 ngeenyawo zenyawo nganye.
Umcebisi weKhaya ulumkisa ukuba ufakelo lokutsala iTrex luthatha ixesha elininzi kunye nabasebenzi, iindleko ezininzi ziyehla kufakelo. Ukufaka i-Trex decking kuya kubiza i-avareji ye- $ 8 ngonyawo wesikwere.
Babeka ixabiso lokufakelwa ubuncinci beTrex decking kwi- $ 6-8.50 ngeenyawo zenyawo. Elona xabiso liphezulu lokufakwa libekwe kwii-8-9.50 zeenyawo zenyawo.
Ngaphandle kokuba uza kuzakhela ipakethe ngokwakho, kuya kufuneka ujongane neendleko zabasebenzi. Uninzi lweekhontraktha zetheko zibiza iyure ngoko kuya kufuneka ujonge uluhlu lwakho lwasekhaya kwaye ubuze iikowuteshini wakube umisele ubungakanani bomgangatho wakho kunye nezinto oza kuzisebenzisa. Qaphela ukuba ezinye izinto zilula ukusebenza kunye nezinye, ke loo nto iyakubangela iindleko zakho zomsebenzi.
Enye into enokuthi ichaphazele iindleko zomsebenzi wedesika yakho luhlobo lweempawu zomgangatho owukhethayo ukuba uzifake kumgangatho wakho. Umzekelo, umgangatho omnye wenqanawa uya kuba lula kakhulu ukwakha kunendawo ephezulu yomgangatho ngoko ke kuya kuthatha ikhontraktha yakho kumgangatho ongaphantsi kunye nomsebenzi kwaye baya kukuhlawulisa kancinci.
Izinyuko zinokuba ngumsebenzi onzima kakhulu ukuze ngaphezulu komgangatho womhlaba zihlala zibiza kakhulu emva koko imigangatho yomhlaba. Qiniseka ukuba uthathe isigqibo kwangaphambi kwexesha ukuba ufuna ntoni (iibhokisi zeentyatyambo, izixhobo zokutyala, iibhentshi, i-gazebos, i-railings, njl. Njl.) Kwaye uxelele abanokubakho malunga neekontraki malunga nabo ukuze bakunike uqikelelo.
Zininzi iindlela zokubala zexabiso elikwi-intanethi phaya apho unokubonisana khona ukuze ufumane iindleko zomsebenzi wokwakha ipaki kunye nokunye. Nazi ezinye ezimbalwa:
Nantsi enye ngokuthe ngqo malunga neendleko zokufaka umthi:
Emva kokuba uthathe isigqibo malunga nesitayile somgangatho, uyilo, kunye nezinto zokusebenza, ngoku lixesha lokuba ufumane indlela yokwenza ukuba umgangatho wakho ubonakale.
Cinga ngento ofuna ukuyenza kumgangatho wakho. Ngaba ufuna indawo ekhethiweyo yokosa inyama ecaleni kwekhitshi lakho? Ngaba ungathanda ukwandisa iimbono zasemva kwendlu yakho ngelixa uhleli ecaleni komlilo? Okanye uyayidinga ukuze womelele ngokwaneleyo ukuxhasa ubunzima be-spa? Qwalasela ngononophelo amanqaku aya kukuvumela ukuba wonwabe ngakumbi kumgangatho wedeski lakho elizayo. Ndwendwela eli phepha ukwenza isiko ngakumbi Izimvo zomgangatho wedolophu yangasemva .
Nazi izinto ezimbalwa eziqhelekileyo ezinokuzibandakanya kuyilo lwakho lwediski yokuqinisekisa ukuba uyenza ngokwezifiso ukuthanda kwakho.
Elinye lawona manqaku aphambili okuba nediski ukuze ube nendawo entle yokuphumla. Ngeso sizathu ukubandakanya iibhentshi zekhonkco yindlela entle yokubonelela uyilo lomgangatho olulungele iintsapho kunye neendwendwe zokuzonwabisa.
Ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi idla ngokwenziwa ngokufanayo okanye ngezinto ezifanayo njengaye wonke umgangatho. Ikwahlala isebenzisa imizila esele ikhona njenge-backrest, nangona ezinye zineendawo zokubuyela umva ezakhelwe kuyilo lwazo.
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zeebhentshi zedreyini kodwa umthetho olungileyo wesithupha xa ukhetha ibhentshi elungele wena kukuqinisekisa ukuba ibhentshi yedesika ikuvumela ukuba uhlale kamnandi. Zama kwaye uqinisekise ukuba isihlalo sebhentshi yomgangatho yindawo kwaye imalunga ne-16-20 ngaphezulu kunomgangatho womgangatho. Ngokubeka isitulo sedenki kwindawo yokuphakama, uya kuvumela indawo yokuhlala kamnandi.
I-pergola kwidesika inokubonelela ngendawo yokuhlala yokumema eyonyusa indawo engasemva kwendlu kwaye inokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya. I-Pergola inokugutyungelwa ngabatyali abaxhonyiweyo okanye izidiliya ezinwabuzelayo kwaye ziludibaniso oluhle nakweyiphi na indawo yangaphandle.
Zakhiwe ngokusisiseko ngokuseta ii-crossbeams ezixhaswe zizithuba zekona. Njengoko kungekho silingi yokwenyani, ngekhe babonelele ngokukhuselekileyo kwimvula, kodwa baphosa umthunzi omncinci kwaye bayakugcina imitha yelanga ingabethi umgangatho wakho we-deck. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu izimvo ze-pergola .
Kuyafana ne-pergola kodwa, njengoko inophahla lokwenyani, iya kukubonelela kunye neendwendwe zakho nokhuseleko ngakumbi kwizinto. Ngaba unokwakhiwa ukuze ume emgangathweni okanye uqhotyoshelwe kumgangatho ukuze unikeze indawo engaphezulu.
Ezi zinokubekwa zijikeleze umgangatho wokubonelela ngendawo yokukhula kwezityalo. Uyilo oludumileyo kukuba babe nezityalo ezibekwe ekupheleni kwezakhelwe kwiibhentshi ecaleni kweepherimitha zakho. Unako kwakhona izixhobo zokucoca ucingo ibekwe ngaphezulu kweeyile zakho zomgangatho okanye iiposti.
Oku kunokuba yinkohliso, ngakumbi ukuba ipaki yakho yenziwe ngomthi. Kodwa umgodi womlilo otshisiweyo uyakwenza indawo entle necocekileyo kuwe kunye neendwendwe zakho ukuba nihlale nizonwabele ngomoya wasebusuku. Unokucinga ngokubandakanya i-grill okanye indawo yokupheka ukuze ube ne-barbecue yangaphandle okanye i-marshmallows yasebusuku.
Xa ukhetha umngxuma womlilo kwidesika uya kufuna ukukhetha omnye othintela ubushushu obukhanyayo ukuba bungonakalisi umgangatho wedesika. Uninzi lwemingxunya yomlilo ephathekayo okanye iikiti ezenzelwe idokodo ziza kunye nokwakhelwa kwisithintelo se-thermal. Ezi zithintelo zomlilo zihlala zakhiwe nge-basalt (amatye e-lava) okanye ezinye izinto zokwenza umlilo ukuthintela ukuhambisa ubushushu ngezantsi.
Njengolunye uhlobo kumngxunya womlilo unokujonga iChiminea ephathekayo. Ezi ziyafana neziko elingaphandle lomlilo elinesiphelo sebhalbhu esinoyilo lwebhalbhu yokukhanya. Ngokwesiqhelo banesiseko esenziwe ngentsimbi kunye ne-oveni yodongwe.
Indawo yokubasa umlilo inokuba yindawo yokumema ukuhlala kunye nokudibana nabahlobo kunye nosapho emva kobumnyama. Nokuba ufuna ukuhlala ujonge inkwenkwezi, pheka ilangatye elivulekileyo, uphucule imeko yakho yasemva kwendlu, okanye ugcobe nje i-marshmallows, zinokuba yindlela elungileyo yokufumana usetyenziso kumgangatho wakho.
Zininzi izinto ezinokuqwalaselwa onokukhetha kuzo xa usakha i uyilo lwangaphandle lomlilo . Ngokusisiseko ngaba iya kuba kukutsha kwegesi okanye iinkuni? Ngaba iya kuba yesiko, yangoku, ye-rustic okanye yesimanje ngesitayile? Ngaba uyafuna uyilo olwakhiwe ngokwesiko olwakhiwe ngumakhi wamatye oqeqeshiweyo okanye uza kuthenga imodeli ye-prefab kwaye uyifake ngokwakho?
Yonke indawo yokubasa umlilo iya kufuna ukufakelwa phezu komatshini wokumelana nomlilo ukuqinisekisa ukuba awonakalisi iinkuni okanye abangele umlilo. Ukongeza uyakufuna ukuqinisekisa ukuba akukho masebe axhonyiweyo asezantsi ukusuka kwi-shrubbery okanye i-tress enokudala ingozi yomlilo.
Ispa encinci, ephakanyisiweyo okanye iphuli inokudityaniswa kuyilo lwenqanawa yakho. Iya kukunika kunye neendwendwe zakho enye indlela yokuphumla nokonwabela ngaphandle.
Xa usebenzisa iinkuni ejikeleze iphuli okanye i-spa, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukunkcenkceshela ngokufanelekileyo ubungqina. Abanini bamakhaya abaninzi bakhetha ukusebenzisa iinkuni ezomeleleyo zetropiki ezijikeleze amachibi anokunyusa ixesha lokuhlala. Umthi odityanisiweyo ngumbono olungileyo kuba uninzi lweentlobo zi-ADA eziqinisekisiweyo zokumelana nesiliphu.
I-trellis sisakhiwo esinqamlezileyo okanye somthi esetyenziselwa ukubamba imidiliya kunye nezityalo. Zombini i-lattice kunye ne-trellis zinokusetyenziselwa indawo esemva kwendlu. Umahluko phakathi kwe-lattice kunye ne-trellis kukuba i-trellis sisakhiwo esakhiwe kwiibhodi ezinqamlezileyo. Ilatisi ibizwa ngokuba yi-trellis xa isetyenziselwa injongo yokuxhasa izityalo.
Kulabo bafuna ukongeza ubumfihlo, umthunzi okanye ukukhula izityalo ezixhonyiweyo i-deck trellis sisisombululo esifanelekileyo. Ayisiyiyo kuphela into yokuba iinkuni ze-trellis kulula ukuzifaka, azibizi kwaye zinokuba yiprojekthi ye-DIY ngeempelaveki. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Uyilo locingo lwelatti ukuphucula umgangatho wakho.
Ukuba unesiteji esiphakamileyo okanye nasiphi na isitayile somgangatho apho kukho indawo ebalulekileyo phakathi komgangatho womgangatho kunye nomhlaba, kuya kufuneka uqwalasele ukubandakanya indawo yokugcina. Ungagcina izixhobo zangaphandle, izixhobo zokulima, kunye nezinye izinto phantsi komgangatho wakho kwaye ugcine indawo. Oku kusebenza kakuhle xa ubeke isiseko esifanelekileyo ukuthintela izinto ezibekwe ngqo emhlabeni apho zinokuba manzi zonakaliswe.
Ukuba ufuna indawo ethe kratya yokugcina ukongezwa kweshedi yangasemva kunokuba luncedo ukongeza ukugcina izinto zilungelelanisiwe. Sibeke ndawonye iposti yezona zilungileyo isoftware yoyilo yabo bafuna ukwenza eyabo.
Phantse zonke iintlobo zeekhonkco zinokuba nezitroli zomgangatho ofakelwe kuyilo lwazo. Zizinto ezikhuselekileyo, kunye nophawu lokuhombisa.
iilokhwe zikamakhulu womtshakazi
Olona hlobo lusisiseko loyilo lomgaqo kaloliwe luqala ngemigca yokubambisa okanye ngololiwe obekwe ecaleni kweparameter yomgangatho. Izithuba ziqhotyoshelwe kwisakhelo somgangatho, zihlala zikwiikona, kwaye iileyili eziphezulu nasezantsi zihamba ngokuthe nkqo phakathi kwala manqaku. Emva koko inkqubo yeereyili ezithe tyaba ziqhotyoshelwe zibaleka ukusuka phezulu ukuya ezantsi kumgaqo wokuqhuba ukujikeleza umjikelezo wedeksi.
Kuxhomekeke kwisitayile kunye noyilo lomgangatho wakho, unokuba neziporo ezenziwe ngomthi, ngentsimbi, ngeglasi okanye ngokudityaniswa kwezi zinto. Umzekelo, iileyili eziphezulu zomthi kunye nezantsi kodwa iileyili zentsimbi ethe tyaba.
Iidesika eziphakame ngaphezulu kwama-30 ngaphezulu kwenqanaba kufuneka zibe nemizila kaloliwe esebenza ngokukuko njengololiwe. Iidiski eziqhotyoshelwe kumakhaya ahlukaniswe lusapho olunye kufuneka zihlangabezane neekhowudi zeKhowudi yeHlabathi yokuHlala (i-IRC).
Ngokwemigaqo ye-IRC, ii-guardrails kufuneka okungenani zibe ngama-36 ubude. Ukuphakama kulinganiswa ngokuthatha umgama ukusuka kumgangatho wendlela ukuya phezulu kumgaqo kaloliwe ongaphezulu.
Izithuba zakho zedesika ziya kunceda ukuseka ubungakanani bedesika yakho kunye nobukhulu. Uya kudinga isithuba ubuncinci kwikona nganye yedesika yakho. Uyakufuna kwakhona ukuba ube nezithuba zokuxhasa iitreyini zakho zomgangatho.
I-IRC ifuna ukuba izithuba zokuhlambalaza zibekwe ziinyawo ezi-6 ngokwahlukeneyo, kungoko kukho ngaphezulu kweenyawo ezi-6 phakathi kweeposti zakho zekona, kuya kufuneka ubeke indawo eyongezelelweyo yokuhlambalaza ukuze uhlangane nemigangatho ye-IRC.
Ngokwesiqhelo, iiposti zomgangatho kufuneka zahlulwe malunga neenyawo ezisi-8 kodwa owona mgama uphezulu uxhomekeke kubungakanani be joist. Iidesika ezinkulu ezikhulu ziya kufuna kwakhona isithuba esincinci phakathi kwezithuba. Umgaqo wesithupha, i-16 x 16 yeenyawo ezinyaweni zinokuba nezithuba zemigangatho ezahlulwe malunga neenyawo ezi-7-8 ngaphandle kwayo, nantoni na enkulu ke leyo enokuba nezithuba zemigangatho eyahluliweyo ziinyawo ezintlanu.
Uhlobo lwezinto ezisemgangathweni zokuchopha ziya kuchaphazela isithuba. Iiposti zomthi ziya kufuna iinyawo eziqhelekileyo eziyi-8 okanye ngaphantsi, kodwa iipali zesinyithi, ezinokuxhasa ubunzima obungaphezulu, zinokwahlulwa phakathi.
Kukwalumkile ukukhangela iikhowudi zokwakha zengingqi yakho xa usenza isigqibo sokuba zingaphi izithuba ozifunayo kunye nokuba zikude kangakanani phakathi kwazo.
Umphezulu wezithuba zakho zomgangatho unokumiliselwa kuhlobo loyilo. Banokwakhiwa ukulungiselela ukukhanya kwezibane okanye izixhobo zezibane okanye ukubamba abatyali okanye imifanekiso eqingqiweyo.
Iibalusters zediski okanye iipikethi ziyinxalenye yeseti epheleleyo yezitimela zomgangatho. Ziziseko ezixhasayo ngokuthe nkqo phakathi kweetayile eziphezulu nezingaphantsi kwezitrato zomgangatho. Banokuza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa.
I-Balusters ikulawulwa yi-IRC. Ngokwekhowudi, ii-guardrails akufuneki zibenendawo evulekileyo enkulu ngokwaneleyo ukuvumela ukuba indawo eyi-4 idlule kuyo ke kuya kufuneka uyigcine engqondweni xa ukhetha iibalusters zakho.
Izibane ezifakwe phantsi kwamanyathelo enqanaweni zinokusebenza kukhuseleko kunye nokwandisa imeko yendawo yakho yangasemva. Izibane ezakhelwe-ngaphakathi zinokuchaphazela indawo yakho yomgangatho kunye nokwenza ukuba kube mnandi ngakumbi emva kobumnyama.
Le deck isebenzisa ukukhanya phantsi kwemiphetho ukukhanyisa iperimeter yesakhiwo. Olu luyilo lubukeka luhle kwaye luyasebenza ukuqinisekisa ukuba iindwendwe azikhubeki ecaleni.
Izibane zeposi zokuhambisa ucingo elangeni - Jonga eWayfair
Izibane zeposi zedesika ziyindlela elula nenhle yokuqinisekisa ukuba ungonwabela umgangatho wakho ngorhatya. Ungathenga izibane zeposti kumgangatho weendlela eza kudibanisa uyilo lomgangatho jikelele. Banokuxhonywa ngokulula ngaphezulu kweeposti zakho ukubonelela ngokukhanya apho ufuna khona.
Iindidi ezininzi zezibane zeposi zibiyelwe lilanga zenza ukuba zikwazi ukuzisebenzisa ngaphandle kokufuna ukusebenzisa amandla okanye ukutshintsha iibhetri.
Ukuba wakha ipaki yakho kwinqanaba eliphezulu, kuya kufuneka uqwalasele ukufaka inkqubo yokuhambisa amanzi phantsi komgangatho. Ukuba nenkqubo yokuhambisa amanzi phantsi komgangatho iya kuqinisekisa ukuba, endaweni yokuqokelela phantsi komgangatho wakho, amanzi emvula aya kujoliswa ngaphandle kwaye kude nedonki yakho.
Inkqubo yokuhambisa amanzi phantsi komgangatho ibaluleke ngokukodwa ukuba uhlala kwindawo enethayo kakhulu okanye edla ngokuba nezikhukula. Ukuba ucinga ukusebenzisa ezantsi kwedesika yakho njengendawo yokugcina, le ikwayinto ebalulekileyo ukuyifaka.
Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule xa uyila ipaki yakho kukuba kufanelekile ukuba ilingane nombono wakho uphela wekhaya lakho. Oku kuthetha ukuba kufuneka ihambelane nesitayile sasekhaya.
Kukwabalulekile ukuba umgangatho wakho ulingane nombono wakho yeyiphi imisebenzi ofuna ukuyonwabela kumgangatho wakho. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ucwangcisa ipaki yakho ngendlela oceba ukuyisebenzisa ngayo.
Enye yeendlela ezilungileyo kunye nezona zilula zokuyila ipaki esebenzayo kukusebenzisa isoftware yoyilo lwidesika. Zininzi iinkqubo zesoftware yoyilo lwasimahla olufumanekayo kwi-Intanethi onokuzisebenzisa. Ngolwazi oluthe kratya jonga inqaku lethu kule isoftware yoyilo esemgangathweni .
Esinye isixhobo esikwi-Intanethi ekufuneka usisebenzisile ukuze ufumane iphupha lamaphupha akho ziikhaltyhuleyitha zekwi-intanethi kunye noqikelelo. Ngokukunceda ubone iindleko zekhonkco lakho kunye nezinto ezifunekayo ngaphambi kokuba uqale ukwakha. Oku kuya kunceda ekuqinisekiseni ukuba ufumana le nto uyifunayo ngexabiso onokufikelela ngaphandle kokuthenga izinto.
I-Decks.com ine-calculator efanelekileyo kwi-intanethi enokukunceda ukuba unqume ukuba zingaphi izinto ezifunekayo ngokusekelwe kwimilinganiselo yeprojekthi yakho. Ungasifumana isixhobo Apha . Banesixhobo sokumisela iindleko zezixhobo Apha .
Ngaphandle kwesoftware yoyilo lwesoftware, enye indlela elula yokuqinisekisa ukuba uyilo olufanelekileyo lwidesika kukufumana isicwangciso esifanelekileyo sedikethi kwi-intanethi. Kukho izibonelelo ezininzi ezikwi-Intanethi zesicwangciso somgangatho wasimahla. Nazi ezinye zazo:
Uninzi lwabacwangcisi be-intanethi esiluhlu apha ngasentla banezicwangciso ezahlukeneyo ezifanelekileyo ukusetyenziswa kunye nezinto ezahlukeneyo, kubandakanya ukhuni.
Ukuba ujonga imizekelo ethile yezicwangciso zomthi, jonga ezi:
Indlela elula yokufumana uyilo lomgangatho wokhuni ngaphandle kokukhathazeka malunga neendleko zomsebenzi kukwenza iDIY ngekhithi yomgangatho wokhuni. Ikhithi ekulungele ukuhlanganiswa iqulethe iziqwenga ozihlanganisayo ukuze uncamathisele iplanga lomthi ekhayeni lakho.
Unokufumana iisampulu zeekiti zomgangatho wokhuni apha:
Ukuba ufumene icebo elilungileyo okanye uyilo lomgangatho kodwa ungaqinisekanga malunga nokwazi ukuzakhela ngokwakho, unokuhlala ucinga malunga nokuqesha iikontraki zasedikeni.
Indlela yesiko yokuqinisekisa ukuba ufumana ikhontraktha elungileyo kumgangatho wokuqala kukubuza kubantu obaziyo malunga nokudluliselwa. Ukuba unomhlobo, ilungu losapho okanye umntu osebenza naye one-deck, okanye ukuba ubona uyilo oluhle lomgangatho kwelinye lamakhaya abamelwane bakho, babuze ukuba ngubani owakhele bona nokuba bangakudlulisela na.
Xa ucela ukuthunyelwa kwikontraka yomgangatho, kuya kufuneka ubuze abathengi babo bezinto ezilandelayo:
1. Ngaba iprojekthi igqityiwe ngexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali? Ukuba akunjalo, kutheni?
2. Ukhe wanikwa uhlaziyo ngobume beeprojekthi kwaye waziswa ngaphambi kwexesha kweendleko?
3. Ngaba ikontraka kwakulula ukusebenzisana nayo? Ngaba bakuphethe kakuhle ukusilela?
4. Ingaba ikontraka isebenze neqela elilungileyo?
5. Ungabaqesha kwakhona?
Nje ukuba ugqithiselwe, kuya kufuneka ucele udliwanondlebe nosonkontileka. Ngexesha lodliwanondlebe, kuya kufuneka ubuze le mibuzo ilandelayo:
1. Zingaphi iiplani zoyilo ozakhileyo?
2. Ngubani oza kujongana nokufumana iimvume zokwakha eziyimfuneko?
3. Ngubani oya kuqhakamshelana nezixhobo zikawonke-wonke zalapha ekhaya ukufumana ulayini wangaphantsi komhlaba.
4. Uza kusebenza kwangethuba okanye emva kwexesha elingakanani?
5. Injani ishedyuli yentlawulo?
6. Loluphi uhlobo lweinshurensi onayo.
Ukuba kunokwenzeka, kuya kufuneka ucele ukutyelela indawo asebenza kuyo ikhontraktha.
Unako nokuya kwi-Intanethi ukufumana ikhontraktha yendawo yokuhlala. Esinye isikhombisi esifanelekileyo kwi-Intanethi seekhontraktha zalapha uluhlu lweeAngies: https://www.angieslist.com/. Le ndawo ikuvumela ukuba ubone uphononongo kunye nokulinganiswa okunikwe iikontraki ezahlukeneyo ngabaxhasi bazo bangaphambili.
Kukho noMbutho weSizwe wabakhi baseKhaya. Ngelixa umkhombandlela unokubonakala usoyikisa, ubuncinci unokuqiniseka ukuba abo badweliswe apha ngabakhi abanobuchule nabaziwayo.
I-Yelp kunye neThumbtack zikwayindlela elungileyo yokufumana kunye nokunxibelelana neekhontraktha zasedikeni ezikufutshane nawe. Banokukunika uluhlu lweekhontraktha ngokweendawo. Isithupha sikwakuvumela ukuba uchaze iprojekthi yakho kwaye ubuze iikontraki ngoqikelelo lwasimahla.
Kukho iPorch.com ehambelana nabantu abaneekhontrakthi kwindawo yabo (ufaka ikhowudi yakho ye-zip kunye neenkcukacha zeprojekthi) abanokubanceda ngeeprojekthi zasekhaya. Ewe, iidesika zibandakanyiwe.
Ngaphambi kokuba siqhubeke, makhe sithethe kancinci malunga neeplanga zomthi. Njengoko besesitshilo ngaphambili, abantu abaninzi baziva ngathi uyilo lomthi zezona ntlobo zintle kakhulu. Nangona kunjalo, zihlala zinzima kwaye zichitha ixesha ukuzigcina. Nazi izinto ezimbalwa oya kufuneka uzenze ukuze ugcine iplanga lakho lomthi.
Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuba ipaki yakho ikhuselwe kwimvula, ikhephu, umkhenkce, kwaneziphuzo ezonakeleyo kukusebenzisa ibala lokuthintela imozulu.
Ukugcinwa kunye nokutywinwa komgangatho wokhuni yinxalenye ebalulekileyo yokugcina umgangatho wakho. Iidesika ezingafunyaniswanga zithambekele kwimozulu, ukujija kunye nokwenza buthathaka xa zibekwe elangeni ngqo, kwimvula enzima nakwezinye izinto. I-stain kunye ne-sealer inokukhusela ipakethe yakho yamatye kwizinto, kodwa zihlala zikhuphuke. Kananjalo, kuya kufuneka ugcine kwaye uphinde wenze kwakhona iplanga lakho leplanga rhoqo kwiminyaka emibini.
Xa ucwangcisa ukugcinwa kunye nokutywinwa kwedesika yakho yomthi, khetha ixesha apho amaqondo obushushu angaphezulu kwama-50 degrees Fahrenheit, mhlawumbi entwasahlobo okanye nasehlotyeni, kwaye ukukhanya kwelanga okubetha kumgangatho wakho womelele kwaye ngqo. Ibala kunye netywina elisetyenzisiweyo kwezi meko zinethuba elihle lokungena ngenene emthini kunye nokwenza indawo ekhuselayo engayi kuhlamba okanye iphele ngokukhawuleza.
Ibala lomgangatho wokhuni liphela ngokuhamba kwexesha ngenxa yokuvezwa kwezinto. NgokweNgxelo zabaThengi, olona hlobo lubalaseleyo lwamabala emithi luya kuhlala kangangeminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Amabala ahlulwa aba ziindidi ezintathu: Solid, Semitransparent, and Clear sealer.
Amabala aqinileyo ayafana nepeyinti ngengqiqo yokuba ayazifihla iinkozo zomthi. Umgangatho ofana nowepeyinti wamabala aqinileyo ubenza ukuba babe ngabona bahlala ixesha elide. Idyasi elungileyo yebala eliqinileyo kufuneka ihlale iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Umda webala eliqinileyo kukuba, njengepeyinti, kukho intsalela eseleyo eshiyekileyo kwaye, emva kokufaka iidyasi ezininzi kwindawo enye, ekuhambeni kwexesha inokukroba okanye iqhekeke.
Amabala e-Semitransparent avumela ingqolowa yeenkuni ukuba ibonwe kancinci. Ke olu lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukubonisa umbala wendalo kunye nokuthungwa kweenkuni zakho. Azinzima njengamabala aqinileyo kodwa unokulindela ukuba idyasi yamachaphaza okuhlala iminyaka emibini okanye emithathu.
Cacisa ukutywina okuqulathe phantse kungabikho mbala wongezelelekileyo, ke bona bayazivumela iinkuni ubuhle bendalo ukuba bukhanye. Nangona kunjalo, ukutywina okucacileyo akukho nto kubo ekwaziyo ukukhusela iinkuni kwimitha ye-UV, ke lindela ukubuna. Kananjalo, azihlali ixesha elide ngenxa yoko kuya kufuneka uphumle rhoqo ngonyaka.
IiNgxelo zabaThengi kuvavanyiwe kwaye kwahlaziywa amabala angama-28 ahlukeneyo kumgangatho wokuba ahlala ixesha elingakanani kwaye aqhuba kakuhle kangakanani. Kuya kufuneka ujonge uphononongo lwabo apha: https://www.consumerreports.org/products/wood-stain/ratings-overview/
Esinye isixhobo esilungileyo sokufumanisa ukuba yeyiphi na indawo enendawo efanelekileyo kakhulu oya kuba yiDeck Stain Help.com. Balumkisa abanini-ndawo ukuba indawo yabo, apho bahlala khona kunye nokuba zinjani iimeko, kufuneka babandakanye ekukhetheni ibala abanokuthi bathathe isigqibo sokulisebenzisa.
Xa usiya kwiphepha loNcedo lweDisk Stain, baya kukubuza iimpendulo kwimibuzo emihlanu ukumisela ukuba loluphi uhlobo lwamabala okumgangatho olungele wena. Ungazama apha: https://www.deckstainhelp.com/what-is-the-best-deck-stain/#more-2020
1. Uluhlu lwe-TWP 100
2. Buyisela i-A-Deck Wood Stain
3. U-Armstrong Clark Wood Stain
4. Defy Extreme Umthi Ibala
5. Uthotho lwe-TWP 1500
6.Lungele ukuTywina iStain Wood Stain
Njengomgaqo ngokubanzi, iimodareyitha zibonakala ngathi zikhetha oko bakubiza ngokuba kukungena okucacileyo okungamabala acocekileyo. Phantse onke amabala aphezulu kulo nyaka ahlelwa ngoluhlobo.
Ngokwabo, imeko ebonakalayo yala mabala ivumela iinkozo zomthi ukuba zibonise, ngelixa uhlobo olungena ngaphakathi luqinisekisa ukuba ibala lingena kwaye lenze ukuba kube lula ukuphinda kusetyenziswe.
Nje ukuba ugqibe kwelokuba loluphi uhlobo lwetheko oya kulusebenzisa, kuya kufuneka ufumanise ukuba lingakanani elo bala oza kulithenga kwaye ulisebenzise ukugubungela umhombiso wakho ngokupheleleyo.
Ngokomndilili, i-gallon yebala kufuneka igubungele i-150-300 yeenyawo zenyawo yomgangatho. Linganisa umgangatho wakho we-deck ngokuthatha ubude bamaxesha obubanzi. Emva koko fumana imilinganiselo yeziporo ngokufumana iinyawo ezinomgama kwaye uziphindaphinde ngobude obuphakathi. Ukuba unamanyathelo, linganisa ukuba ububanzi buphinda-phinda njani ngenani lamanyathelo.
Yongeza zontathu ezi milinganiselo kwaye uya kuba noqikelelo olubi kumfanekiso wesikwere sediski yakho. Qaphela, ukuba unazo naziphi na ezinye izinto ezinomthi ezinamabala ezifuna ukucocwa (iibhentshi, izixhobo zokutyala, iipergolas, njl.njl., Kuya kufuneka uzilinganise. Kodwa isikhokelo sakho esisisiseko sokumisela imifanekiso yesikwere sedeksi yakho sisonke semilinganiselo yemigangatho yakho, yeziporho, nezinyuko.
Kukwakhona nezixhobo zokubala ezikwi-Intanethi, ubukhulu becala ezivela kubanikezeli bamabala, ezinokukunceda ekuchongeni ukuba ungakanani na amabala owafunayo kuyilo lwakho lwedesika. Jonga ezimbalwa apha:
Ukutywinwa komgangatho wokhuni ngobuchwephesha bobuchwephesha bobabini ziNgxelo zabaThengi kunye noNcedo lweDisk Stain ekubhekiswa kuyo njengamabala acacileyo okanye ukutywina okucacileyo. I-Deck stain kunye ne-seck sealer kufuneka ukuba inikeze iindawo zokhuni ngokukhusela kumanzi.
Ukusebenzisa i-seck deck sealer endaweni yebala kuvumela i-deck yakho ukuba ibonakale yendalo ihlala ibonakala ingafakwanga okanye iphathwe. Iya kubonelela ngomgangatho wakho ngokukhuselwa kwimvula nakubumanzi.
Sula amabala okanye ukutywina okucacileyo, nangona kunjalo, akunalo mbala oxutywe kuwo. Ngelixa oku kuqinisekisa ubume bendalo kunye nemibala yeenkuni ezikhanyayo, ayiboneleli ngomgangatho wokhuseleko elangeni.
Ukuba ipaki yakho ikwindawo enomthunzi, okanye unesistim esihle sokumisa okanye inkqubo ye-canopy endaweni, unokusebenzisa nje i-seck seck. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ezi azihlali ixesha elide kwaye unokufuna ukuphinda uhlaziye ipakethe yakho ngonyaka.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, uxinzelelo lwenkuni olusele lunyangiwe ukuba lwenze ubungqina bemozulu. Ngenxa yoku, uxinzelelo oluphathwe kumgangatho wamaplanga oyena mgqatswa uphambili kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo zeeplanga zomthi eziza kunyangwa ngeseka ecacileyo yomgangatho.
Ke yeyiphi eyona nto itywina ipakethe yeplanga ecociweyo? Ewe, i-Deck Stain Uncedo oluphezulu lubekwe kwindawo ecacileyo yiDefy Extreme Clear Wood Stain. Olu luguqulelo olucacileyo lwento ebonakalayo engacacanga yomda webala u-Defy oMthi ongowesine kumgangatho ophakamileyo ka-2018.
I-Defy Extreme Clear Wood Stain icacile kwaye iyabonakala kwaye ibonelela ngokuthintela amanzi ngokugqwesileyo ngaphandle kokuthintela ubuhle bendalo beenkuni. Kwakhona, nangona kunjalo, iqulethe i-nano particles ye-zinc oxide. Ezi nanoparticles azichaphazeli umbala okanye amabala angcolileyo kodwa ziyayicoca imitha ye-UV. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ucokise unyaka nonyaka okanye rhoqo emva kweminyaka emibini okanye njalo.
Ipeyinti yediski yindlela entle yokubuyisela okanye yokuphefumla ubomi obutsha kwindawo entsha. Ukuba awusathandi umbala wezinto zakho zedesika, unokongeza idyasi entsha yepeyinti ukuze uhlaziye kwaye uhlaziye ukubukeka kwakho.
Ipeyinti yedesika ngamanye amaxesha ithathwa njengebala eliqinileyo lomgangatho. Njengoko besesitshilo ngaphambili, amabala okuqina wedikki anombala kakhulu kwaye aya kuwugubungela ngokupheleleyo umphezulu womthi okanye ezinye izinto ezibekwe ngaphezulu. Banikezela ngokhuseleko olugqwesileyo lwe-UV kwaye bahlala ixesha elide, ukuya kuthi ga kwiminyaka emihlanu ukuya kwelishumi.
Esinye sezizathu ezifanelekileyo zokusebenzisa ipeyinti yomgangatho endaweni yesitayile kwidesika yomthi kukuba inokunceda ukuhambisa ngaphezulu kokuqhekeka kwiibhodi ezindala. Uninzi lwepeyinti lomgangatho lusekwe kwioyile kunye ne-acrylic kwaye luyilelwe ukumelana nokuqhekeka nokuba kuvele kumaqondo obushushu aguqukayo. Uninzi lukwanesifo sokuxhathisa ngenxa yoko yenye into edityanisiweyo.
Nokuba awufuni ukupeyinta idesika yakho yonke, ungafuna ukuqaphela ukupeyinta iindawo ezihamba abantu abaninzi, ngakumbi ezo zijikeleze iimpawu zamanzi ezinje ngeJacuzzi okanye amachibi. Ungathenga iintlungu zedreyini ezingafakwanga tyibilika kwezi ndawo ukunqanda iingozi.
Ingxaki enkulu ngepeyinti yomgangatho awungeni ngaphakathi, ngenxa yoko ushiye ifilimu yezinto ezinemibala kumphezulu womgangatho. Oku kuthetha ukuba iidesika ezenziwe ngepeyinti zithambekele ekuqhekekeni okanye ekuxobeni.
Ipeyinti yediksi nayo inokubiza kakhulu kunebala. Kukwanomsebenzi omninzi kakhulu njengoko ungeke ukwazi ukubamba ibrashi kunye netoti yokupeyinta kwaye uyiqhwabe kumgangatho wakho. Kuya kufuneka ufake isicelo sokuqala ngaphambi kokufaka okanye ukufaka ipeyinti kwakhona.
Ukukunika nje icebo lokuba zeziphi ezona ndlela zibalulekileyo kubo, makhe sijonge izinto abazithethayo zezona zilungileyo: I-KILZ yangaphakathi / i-Enamel Porch yangaphandle kunye nePatio Latex Floor Paint.
Bayayithanda i-KILZ ngenxa yokuqina kwayo. Le peyinti iyamelana nokuqhekeka, ukuqhekeka, ukuchuba kunye nokuphela. Inesiphelo esigudileyo, esisezantsi esikhazimlayo esidibanisa indawo ezigadalala kwaye siyabakhusela kwimozulu nakwizithuthi ezixineneyo. Kwakhona kulula ukuyicoca.
Banika nenqanaba eliphezulu kwi-KILZ. Ngelixa iza kwisithathu ngokubanzi, lolona khetho lwabo lubalaseleyo lohlahlo-lwabiwo mali. Ukukhetha kwabo okuphezulu, nangona kunjalo yi-Behr Premium Wood Finish.
Bayayithanda i-Behr yokugqitywa kwethoni ye-redwood kunye nokuthintela amanzi kunye nokukhuselwa kwemozulu. Kulula ukufaka isicelo kwaye somile malunga neeyure ezine.
Bayayithanda iKILZ, engena kwinombolo yesithathu. Nangona kunjalo, abathandayo nguAnvil-Deck-A-New. Bayayithanda kuba ipeyinti enganyangekiyo esliphusayo eza ngemibala emi-5 kwaye inokukhusela zombini iinkuni kunye nekhonkrithi. Njengepeyinti ye-acrylic eyi-100%, ime kakuhle ukugcwala kweenyawo kunye neemeko zemozulu ezibi.
Njengoko besitshilo kulo lonke eli thuba, uyilo olugcinwe kakuhle, nokuba lwenziwe ngomthi okanye ngenye indlela, luya kubonelela wena nabahlobo bakho kunye nabantu obathandayo ngendawo entle yokuxhoma kunye nokonwabela ngaphandle iminyaka ezayo.
Ukuqinisekisa ukuba ufumana olona hlobo lokusebenzisa kunye nolonwabo ngaphandle kwedesika yakho, kubalulekile ukuba uthathe amanyathelo okubuyisela indawo yakho rhoqo. Nanga amanyathelo okubuyisela umgangatho wokhuni oya kuthi uwathathe rhoqo.
Omnye umtsalane omkhulu weeplanga zomthi kukuthungwa kunye nokuziva komgangatho wokhuni phantsi kweenyawo zabantu. Ngelixa wena neendwendwe zakho kunganyanzelekanga ukuba unganazi zihlangu okanye uhlale phantsi kumgangatho weenkuni, ufuna ukuqiniseka ukuba olo khetho luhlala luvulekile kubo. Oku kuthetha ukuba kufuneka uqinisekise ukuba umphezulu womgangatho wakho wokhuni ucocekile kwaye ucocekile. Awufuni ukuba abantu bafumane i-splinter okanye bakhubeke kwibhodi engalinganiyo.
Umgangatho wakho ubonakalisiwe kwizinto kunye notshintsho kwimozulu. Ukukhanya kwelanga, imvula nekhephu, iintloko ngequbuliso okanye ukubanda, kunye nokufuma kunokubangela ukuba ukhuni luqubeke. Xa iibhodi zeenkuni zomgangatho wakho ziqala ukuya kwi-warp, ziya kuqala ukujija phezulu kwaye zingalingani ngokufanelekileyo njengangaphambili. Iibhodi ezijijekile ziyingozi yokukhubeka ongafuniyo ukuziveza kuyo.
Vavanya umgangatho wakho osemgangathweni rhoqo kwiinyanga ezimbalwa ukumisela ukuba kukho naziphi na iibhodi ezijijekileyo. Ukuba ufumana nantoni na kungcono ususe ngokupheleleyo. Faka endaweni yeebhodi ezintsha kwaye uvumele ezi bhodi zihlale malunga neeveki ezine ukubavumela ukuba zome kwaye zande. Emva koko isanti ngokulula iibhodi ezintsha kwaye ungeze ibala okanye ipeyinti ukuba unqwenela ukuqinisekisa ukuba ziyahambelana neebhodi ezindala. Okokugqibela, kuya kufuneka ufake uphawu lokuthintela imozulu.
Ukuba usebenzisa iinzipho kwibhodi yakho yomthi, le yenye into ekufuneka uyihlole rhoqo. Awufuni naziphi na izikhonkwane ezinamathelayo ukusuka kumgangatho wakho, ngakumbi ukuba kukho abantwana abakufutshane, njengoko kunokubangela ukwenzakala.
Ukuba ubona iinzipho ziqala ukunamathela, kungcono ukuba uziphinde zikhawuleze. Betha intloko yesikhonkwane ngesando kude kube kungaphezulu okanye ngaphantsi kwinqanaba kwakhona ngomgangatho womgangatho. Emva koko thatha isixhobo sokusetha isikhonkwane, usibeke ngaphezulu kwesikhonkwane kwaye usibethe ngesando de intloko yesikhonkwane itshone kancinci. Intloko yesikhonkwane kufuneka ihlale kancinci ngaphantsi komphezulu webhodi.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufumana nje izikrufu kumgangatho wakho wedesika. Imigangatho ejijekileyo ingumsebenzi onzima kakhulu emva koko ibethelelwe emgangathweni, ke zihlala zibiza kakhulu ukufakela, kodwa ekuhambeni kwexesha, izikrufu kunqabile ukuba zinamathele okanye zincothulwe ukuze ugcine okokugcina ekuhambeni kwexesha.
Ukuba ipakethe yakho ibonakalisiwe kuninzi lweenyawo zendlela, inokukrwitshwa okanye ihluthwe. Qiniseka ukuba unelinye ibala lasekuqaleni okanye ipeyinti oyisebenzisileyo kwidesika yakho ukuze uyikhathalele le mibala.
Faka isixa esikhulu sesisa kwibala lokuqala nokuba usebenzisa ibala okanye nokuba lilaphu elimanzi. Emva koko susa ukugqitha kude umphezulu okrwitshiweyo uhambelane nomphezulu ojikelezileyo kwakhona.
Ukuba ubona imingxunya encinci okanye iindawo ezonakalisiweyo kwiibhodi zakho zeenkuni, oku kunokuba yimiqondiso yokubola. Uya kufuna ukulungisa le miqondiso mincinci ngokukhawuleza ngaphambi kokuba iqale ukutshabalalisa iibhodi zamaplanga kunye nokonakalisa indawo yakho.
Unokulungisa imingxunya emincinci kunye neminye imiqondiso yokubola ngokusebenzisa ukufakwa kweenkuni. Ukuzaliswa kweenkuni kuyilelwe ukugcwalisa imingxunya emincinci ngomthi. Inokulungelelanisa ukungangqinelani okuncinci emthini, okufana nomngxuma oshiywe sisikhonkwane esilahlekileyo okanye nje ukudibanisa idepot enzulu ngokwenene emthini.
I-Wood filler yenziwe ngomxube wezinto ezizalisayo kunye ne-arhente ebophayo kwaye ihlala ikhangeleka ngathi yi-putty. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho ukuze zikwazi ukuthelekisa indawo eziyingqongileyo.
Ukuzaliswa kweenkuni kungena kwityhubhu, njenge-epoxy, okanye iibhafu. Ukuzaliswa kweenkuni kwimibhobho kulula ukuyisebenzisa njengoko uyibeka nje kwindawo eza kugcwaliswa kwaye ucofe isixa esithile. Ukuzaliswa kweenkuni kwiityhubhu, nangona kunjalo, kukuvumela ukuba ufumane ukogquma okungaphezulu. Ukhupha imali oyifunayo ngaphandle kwemela ye-putty emva koko uyikrobe kuloo ndawo.
Qaphela ukuba, ukuba ucwangcisa ukugcina iinkuni, kuya kufuneka wenze njalo ngaphambi kokufaka isicelo. Ezinye izinto zokuzalisa ziphela zingena ngaphakathi emthini kwaye zinokuwuthintela ekufunxeni ibala ngokufanelekileyo.
Nokuba ungawugcina kangakanani umgangatho wakho, kuyakufika ixesha xa ukucoca kunye nokugcina kungonelanga. Ukugcina ngobuhle ubuhle bomgangatho wakho, kufuneka ubuphakamise rhoqo emva kweminyaka emihlanu okanye nangaphezulu.
Enye indlela efanelekileyo yokuxelela ukuba ipaki yakho ifuna ukuphinda uyiqwalasele kukuyijonga ngokusondeleyo emva kokuba uyihlambile. Ukuba ipakethe yakho iphelile, ukucoca kuya kushiya ipakethe ibukeka ibala. Iiblitschy bits ziinxalenye zomgangatho wakho ezigugileyo.
Ukuphinda uvuselele umgangatho wakho, kufuneka uqale uwuhlube ngokusebenzisa i-deck stripper. Abahluli beedkki basusa naziphi na iingubo ezindala okanye ezikhululekileyo zebala ledreyini okanye isitywina. Oku kuyakushiya unendawo ecocekileyo oza kusebenza nayo.
Emva koko, kuya kufuneka ufake isicoci somgangatho. Umcoci we-Deck uya kususa imicu yeenkuni ezigugileyo nezonakeleyo ebusweni bomgangatho wakho aze avelise indawo entsha yomthi. Ukuba ufumanisa ukuba unamabala amnyama okanye aluhlaza kumgangatho wakho emva kokuwukhulula, lo luphawu lwexoshomba. Kuya kufuneka ufumane isicoci somgangatho kunye nesiseko se-bleach ukulahla le nto. Sebenzisa i-bleach esekwe kwindawo ecocekileyo kuqala emva koko esemgangathweni esemgangathweni.
Emva kokuba ukhulule kwaye ucocekile kumgangatho wakho, ulinde ukuba wome iintsuku ezimbalwa. Emva koko kuya kufuneka uphinde ufake ibala, ukutywina, okanye ukupeyinta, ngokokukhetha kwakho.
Kufuneka ucoce rhoqo umgangatho wakho wamagqabi, amasetyana, kunye namasebe awayo. Amagqabi kwindawo yakho anokutsala izinambuzane kwaye angcolise nendawo yakho. Qinisekisa ukuba uyacoca kwaye ungabashiyi bafumbe kumgangatho wakho. Imilenze evela kwimithi ekufutshane ewela kumgangatho wakho inokuwonakalisa umphezulu kunye neebhodi.
Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha, kunokuba ngumbono olungileyo ukugcina indawo ecacileyo kwindawo yakho. Okanye, qiniseka ukuba nayiphi na imithi ejikeleze ipaki yakho iyanqunyulwa ukuze kungabikho bungozi bamagqabi okanye amasebe awayo kunye namahlumela afika kuwo aqokelele kumgangatho wakho.
Iindlela eziqhelekileyo zokucoca, ezinjengokutshayela, ukukorobha okanye nokukhuhla akusayi kwanela ukufumana ulwelwe kunye nokuxola ukuba ufuna ukugcina ezi zinto zingabhangisi okanye zonakalise iibhodi zakho ezinomgangatho, ukuhlamba uxinzelelo rhoqo kunyanzelekile.
Kuya kufuneka uhlambe amandla kumgangatho wakho kanye ngonyaka. Ukusebenzisa i-washer yoxinzelelo oluphezulu kuya kulahla ubumdaka obunzulu kwaye kuncede kususe ibala elinenkathazo ekunzima ukuyisusa ngesandla. Ukuhlamba uxinzelelo kuya kuqinisekisa ukuba ukungunda kunye ne-algae azinalo ithuba lokuqokelelana kumgangatho wakho.
Kuyacetyiswa ukuba uhlambe amandla kumgangatho wentwasahlobo. Oku kukuqinisekisa ukuba, xa imozulu ishushu kwaye ihlobo lifika apha, unendawo entle, ecocekileyo, nehlaziyekileyo apho unokuzonwabisa khona.
Unokuqesha umntu ukuba acinezele uhlambe ipaki yakho okanye urente nje okanye uthenge i-washer yoxinzelelo kwaye ukwenze oko. Umgaqo wesithupha, inani loxinzelelo olufunekayo ukuhlamba indawo yomgangatho liya kuba malunga neepawundi ezili-1,500 nge-intshi nganye. Qinisekisa ukuba uxinzelelo lwe-washer oyisebenzisayo lusetelwe ngaphezulu koko, kungenjalo, unokulimaza ikhonkco lakho. Ngokuqhelekileyo yinto efanelekileyo yokuphinda uhlaziye okanye ugcine umgangatho wakho emva kokuhlamba uxinzelelo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba ulinde ubuncinci iiyure ezingama-24 emva kokuhlamba ngaphambi kokufaka nantoni na.
umthombo wamanzi angaphakathi
Ndwendwela eli phepha legalari ngeminye imifanekiso ye- Izimvo zomgangatho weenkuni ukuphefumlelwa kwiprojekthi yakho elandelayo yokulungiswa kwakhona.
I-Elmer's E855 Umchweli weWood Filler, 3.25-Ou… $ 5.99$ 9.66 umthengisi ogqibelele (4639) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
(1) 4x4 (Okwenziweyo 3.5x3.5) I-intshi yeeDisk Post Post… $ 11.95 umthengisi ogqibelele (509) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
INSL-X SU031009A-01 Inqanaba eliqinisekileyo le-Acrylic Anti-… $ 39.69 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-611 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
TWP / Gemini TWP116-1G Rustic TWP Woo… Iidola ezingama-52.90 umthengisi ogqibelele (4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Iingcango zasefrench ekhitshini
ithi phi ebhayibhileni
Izimvo zasekhitshini kwigaraji
imfutshane ntoni ms
iikowuti ezimnandi zothando lwentombi yakho
iinwele zemitshato iinwele ezimfutshane